I-Android kwi-Samsung Omnia | I-Androidsis
ANDROID KWISAMSUNG OMNIA
antocara | | Samsung, Tutorials
Olunye loncedo lwenkqubo yokusebenza evulekileyo kukuba, ukongeza kwiindlela ezisemthethweni, kukho abaphuhlisi abakwandayo, baphucule, bongeze, okanye baqhube ukusebenza kwinkqubo. Ngaphandle kokukhupha nasiphi na isixhobo sophawu lweSamsung ngenkqubo ye-Android, i-Android sele ibonisiwe kwizixhobo ezikhoyo kwintengiso, injalo imeko yeOmnia.
I-Samsung Omnia inezi zinto zilandelayo:
* Iprosesa yeMarvell PXA312 624 MHz;
* GPRS / EDGE / GSM 850/900/1800/1900 MHz kunye ne-HSDPA 850/1900/2100 MHz yokudityaniswa kwi-7.2 Mbps;
* 3.2 ”TFT iscreen sokuchukumisa esipheleleyo ukuya kuthi ga kwimibala engama-65 lamawaka kunye nesisombululo sepikseli esingu-240 x 400,
* Ikhamera edityanisiweyo ukuya kuthi ga kwi-5 MP (kugxilwe ngokuzenzekelayo, ukukhanya kwe-LED kunye nokuzinzisa umfanekiso), kunye nenye yesibini efanelekileyo yeefowuni zevidiyo.
* I-RAM ye-128MB kunye nenye i-256MB ROM, inkumbulo yangaphakathi ye-8 okanye ye-16GB yomthamo wokugcina, kwaye ivumela ukufakwa kweememori khadi ze-MicroSD.
Oku kugqityiwe ngesamkeli seGPS, umsasazi werediyo ye-FM ene-RDS, iWiFi, iBluetooth kunye nonxibelelwano lwe-USB, kunye nemveliso kamabonakude.
Njengoko ubona kwiimpawu zale fowuni, ishiya zombini i-Htc G1 kunye ne-Htc Magic kwi-diapers. Khawufane ucinge ngeli gunya lesoftware kunye nenkqubo ye-Android ngaphakathi.
Njengoko ubonile kwividiyo, oku kusondele kakhulu ukuba kufezekiswe, kwaye iya kulungiswa ngakumbi ngokukhawuleza ukuba i-Samsung I7500 okanye i-Galaxy ikhutshwe kwaye isoftware ephunyeziweyo kwesi siginali inokufundwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » ANDROID KWISAMSUNG OMNIA
I-bitch kukuba i-omnia ayinaso isikrini se-capacitive kwaye ayisebenzi ngokufanelekileyo ukuphatha inkqubo
Ewe isikrini esisebenza kakuhle siya kuqatshelwa. Kodwa kwividiyo uyabona ukuba iphethwe kakuhle. Siza kuzama
Kwaye ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ungayifumana phi iROM kunye ne-Android yale mobile?
Uluhlu lwamagama egama ELVIS sitsho
Ndinexhala, sele ndilinde i-omnia yam, andinakuthatha enye i-omnia nge-android emangalisayo.
Ngoku kodwa awubeki isifundo malunga nendlela yokufaka inkqubo yokusebenza ye-Android kwi-samsung !!
Ngaba ukhona umntu owaziyo iphepha okanye iqonga elichaza indlela yokubeka i-Android inkqubo yokusebenza kwi-samsung omnia?
Ndiyabulela kakhulu kwangaphambili
Ndidinga into enye.Ndine sansung omnia kwaye ndifuna ukubeka i-android kuyo kuba iifestile zeselfowuni zincinci.
molo ndineSamsung jack i637 enewindows 6.5 ndifuna ukwazi ukuba ndingayibeka na kwimibuliso ye-android